Maurizio Sarri oo farta ku fiiqay dhiibatada heysata kooxda Chelsea, kadib barbarahii ay la galeen Southampton – Gool FM
Maurizio Sarri oo farta ku fiiqay dhiibatada heysata kooxda Chelsea, kadib barbarahii ay la galeen Southampton
(Premier League) 03 Jan 2018. Macalinka kooxda Chelsea Maurizio Sarri ayaa qirtay in ay jirrto dhibaato heysata kooxdiisa, wuxuuna hadalkiisan imaanayaa kadib barbarihii goolal la’aanta ahaa ay xalay kula galeen Southampton kulankoodii 21-aad xili ciyaareedkan ee horyaalka Premier League.
Maurizio Sarri ayaa kadib marka ay ciyaarta soo dhamaatay wuxuu la hadlay shabakada caanka ah ee BBC wuxuuna muujiyay sida uu kaga xun yahay in markale ay dhibco lumisay kooxdiisa.
“Waxaan u maleynayaa inaan si fiican ugu ciyaarnay 80 mitir, halka 20-ka mitir kale ee ka mid ahaa gudaha garoonka aan dhibaato ku qabnay”.
“Waxaan sameynay 4 ama 5 fursadood ee aan goolal ku dhalin gaarnay, balse fursadaha badan, waxaa muhiim ah in kaliya aad dhaliso goolka koowaad”.
“Kubada ma aanan u sameynin hab inoo wanaagsan, waana inaan horumar sameynaa, waxaan ku ciyaareenay la’aanta ciyaartoy muhiim ah sida Pedro iyo Willian, ee ku baxay dhaawac dartiis 30-ka daqiiqa ee horey ciyaarta”.
“Qeybta kursiga keydka waxaan ku heysanay kaliya hal ciyaaryahan ee weerar ah waana Ruben Loftus-Cheek oo isna xaaladiisa jireed aan wanaagsaneen sababa la xiriira dhibaatooyin uu ka qabo dhanka dhabarka”.
“Waa inaan ciyaarnaa seddexdii maalmoodba mar, kama fekerayo sanadka soo socda, waa inaan ka fikiraa kaliya kulanka soo socda”.
“kama fekerayo sannadka soo socda, waa inaan ka fekero ciyaarta ciyaarta xigta kaliya” ayuu hadalkiisa ku soo koobay Maurizio Sarri.
Tani waa markii ugu horeysay kooxda Chelsea uu hogaaminayo Maurizio Sarri inay ku fashilmaan weerark Blues in ay dhaliyaan goolal laba kulan xiriir ah.
Bar-barahan ay gashay kooxda Chelsea ayaa waxay ka dhigan tahay inay heystaan 44 dhibcood, waxayna fadhiyaan booska kaalinta 4-aad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League.
Romelu Lukaku oo ka warbixiyay hal arin uu ka codsaday tababare Solskjær kahor kulankii Newcastle
“Atletico Madrid kama cabsaneyso Cristiano Ronaldo” - Madaxweynaha Atletico Madrid oo u digay Juventus